Afrika, 05 June 2019
Arbaco 5 June 2019
Al-Shabaab iyo Kenya oo ku dagaalamay Mandheera
Wararka ka imanaya Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in laba qof ay dhinteen, kaddib markii dagaal uu dhexmaray ciidamada amniga iyo koox loo maleynayo inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin.
Xaaladda magaalada Khartoum oo weli kacsan
Rasaas ayaa weli maanta laga maqlayey magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Sudan ayada oo xiisad ay halkaas ka kacsan kadib laba maalmood oo ciidamada ammaanka ay dileen 60 qof oo ka mid ah dibad-baxayaasha.
Cudurka Ebola oo fara ba'an ku haya Congo
Wasaaradda caafimaadka dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo ayaa sheegtay in in ka badan 2,000 oo kiis oo la xiriira cudurka dilaaga ah ee Ebola laga helay dalkaasi dhaca bartaha Africa.
Kenya oo mamnuucday kalluumeysiga xeebaha u dhow Somalia
Ciidamada Sudan oo dilay dibad-baxayaal
Ugu yaraan 13 qof oo ka mid ah dibad-baxayaasha dalka Sudan ayaa dhintay, kaddib marki ay ciidamada millatariga weerareen koox ka mid ah bannaanbaxayaasha oo ku sugnaa bannaanka xarunta taliska millatariga ee Khartoum.
Farmaajo iyo Abiy Ahmed oo Addis ku Kulmay
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’isul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta ku kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
UNHCR oo qaxooti ay Soomaali ku jiraan ka qaaday Libya
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR ayaa khamiistii shalay si nabdoon uga daad gureysay dalka Libya 149 qof oo qaxooti iyo megangalyo doon isugu jira, iyadoo geysay dalka Talyaaniga.
Ethiopia: Khariiraddu Waa Khalad
Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay ka xun tahay khariirad lagu soo daabacay bogga Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Itoobiya oo muujinaysay khaladaad.
Militariga Sudan oo taageeray Sacuudiga
Golaha millatari ee sida kumeel gaarka ah u xakuma dalka Sudan ayaa wacad ku maray in ay taageeri doonaan dalka Sacuudiga, haddii ay khatar kaga timaado dalka Iran oo ay Sacuudiga hadda ku xafiiltamayaan siyaasadda Bariga Dhexe.
Dawada la isku caddeeyo oo laga mamnuucay Bariga Afrika
Cudurka daacuunka oo ka dillaacay Wajeer